Loogu talagalay Automation
Qalabka Jidh dhiska
Wararka Staba Motor
Waa maxay sababta Karti -xirfadeedka BLDC uusan u gaari karin 100%? Waa maxay sababta Wax -ku -oolnimada Sare ee BLDC Motor u keydsado Tamarta?
Waa maxay sababta Karti -xirfadeedka BLDC uusan u gaari karin 100%? Waa maxay sababta Wax -ku -oolnimada Sare ee BLDC Motor u keydsado Tamarta? Waa maxay sababta waxtarka Motor BLDC uusan u gaari karin 100%? Jaantuska hoose, gudbinta awoodda BLDC Motor waa sida soo socota:
Teknolojiyadda Baabuurka BLDC ee loogu talagalay Nadiifiyaha Vacuum -ka Gacanta ee Gacanta lagu qaato
Teknolojiyadda Baabuurka ee BLDC ee Nadiifiyaha Vacuum -ka Gacanta ee gacanta 1. Xaaladda hadda ee Suuqa Nadiifiyaha Vacuum -ka Gacanta ee Gacanta leh ee Horumarinta joogtada ah ee heerarka nolosha dadka casriga ah iyo dardar -gelinta tartiib -tartiib ah ee xawliga nolosha dadka reer magaalka ah, dadku waayadan dambe ...
Kormeerka Xakamaynta Tayada ee Warshadaha Baabuurta
Kormeerka Xakamaynta Tayada ee Astaamaha Waxsoosaarka Gawaarida ee Tiknoolajiyadda Baabuurka BLDC Motor waa farsamo electromagnetic ah oo garwaaqsan bedelka iyo beddelka tamarta korontada. Marka la barbar dhigo mashiinnada guud, badeecaddu waxay leedahay dhibco isku mid ah: stru farsamo oo la mid ah ...
Sidee loogu wareejinayaa macmiilka BLDC Motor u qalma? Sidee buu u qallafsan yahay Nidaamku ka hor intaadan ka tegin Warshadda Baabuurta ee Staba?
Sidee loogu wareejinayaa macmiilka BLDC Motor u qalma? Sidee buu u qallafsan yahay Hanaanka kahor intaadan ka tegin Staba Motor? Iyada oo ah qodobka ugu muhiimsan ee otomaatiga waxsoosaarka warshadaha, isku halaynta tayada mootada iyo heerka guuldarrada aadka u hooseysa ayaa ah arrimo muhiim ah oo ay shirkaduhu si taxaddar leh u bixiyaan ...
Taariikhda Horumarka Laba Boqol Sano ee Motoorada Korontada
Laba Boqol Sano Taariikhda Horumarka ee Motoorada Korontada Mootada, oo ah tan aan ku sheegno nolol maalmeedkeena, ayaa dib loo raadin karaa qarnigii 19aad. Soo bixitaanka matoorrada ayaa inta badan sabab u ah helitaanka sharciga soo -gelinta elektromagnetic -ka iyo sharciga xoogga korantada. Motors, ge ...
Farqiga u dhexeeya PMSM Motors iyo BLDC Motors
Farqiga u dhexeeya PMSM Motors iyo BLDC Motors Isagoo ka hadlaya farqiga u dhexeeya matoorada PMSM iyo matoorrada BLDC, dhab ahaantii, marka la eego codsiyada mootooyinka casriga ah, farqiga u dhexeeya labadoodu ma aha mid aad u weyn, labadoodana waa la beddeli karaa. Aan marka hore ka hadlo asalka: P ...
Waydiimaha Baabuurtu, keebaa kugu adag?
Waydiimaha Baabuurtu, keebaa kugu adag? 1. Waa maxay sababta uu matoorku u soo saaraa hawo -mareenka? Heerka ku jira wareegga kursiga-saldhigga salka-salka ee bldc waxaa lagu magacaabaa shaft current. Sababaha keenay usha hadda: (2) Waxaa jira is -waafajin ku jira korontada hadda; (3) Miskiin m ...
Falanqaynta iyo Daaweynta BLDC Gawaarida Bilowga Guuldarada
Falanqaynta iyo Daaweynta Baabuurka BLDC Bilowga Guuldarada 1. Danabku aad buu u hooseeyaa si loo bilaabo Baabuurka BLDC. Marka matoorka bldc uusan bilaaban karin ka dib marka la isku xiro korontada saddexda weji, sababaha suurtagalka ah waa: (1) Habka isku xirka ee loo qoondeeyay matoorka bldc waa inuu noqdaa delta (△) connectio ...
Sababaha Dhibaatooyinka Xaaqidda Baabuurka iyo Hababka Dayactirka
Sababaha Dhibaatooyinka Xaaqidda Baabuurta BLDC iyo Hababka Dayactirka Marka farqiga u dhexeeya giraanta gudaha ee sidda iyo joornaalka ama giraanta dibadda iyo daboolka dhammaadku ka weyn yahay 0.1mm, stator -ka iyo rotor -ka ayaa xoqmi kara (xaaqi). Marka caarada ay fududaato, BLDC Motor weli wuu bilaabi karaa oo socon karaa, b ...
Sayniska Baabuurka 丨 Fahamka Algorithms-ka Xakamaynta Matoorka BLDC Hordhac: Macaamiishu waxay u baahan yihiin qalabkooda gurigooda, aaladaha beerta iyo alaabada baabuur-wadista si ay u noqdaan kuwo ka awood badan, cabbirkoodu yar yahay kana waxtar badan. Sida badeecooyin badan oo elektiroonig ah oo macmiil ah, macaamiisha ayaa sidoo kale filaya ...
Qaab Fudud oo Degdeg ah oo lagu Xukumo Haddii Baabuurka BLDC uu Wanaagsan yahay ama uu xun yahay
Qaab Fudud oo Degdeg ah oo lagu Xukumo Haddii Baabuurka BLDC uu Wanaagsan yahay ama uu xun yahay A. Isticmaal Shaxda Gilgilaha Shaker-ka daboolku wuxuu cabbiraa iska-caabbinta dahaarka ee u dhexeeya dabaysha saddex-waji ee matoorka (danab lagu qiimeeyay 380V) iyo iska-caabbinta dhulka ( ilaa shaashadda). Dahaarka res ...
Farqiga u dhexeeya Qiimaha Waxtarka Tamarta Tamarta ka dib Hirgelinta Heerka Qaranka Shiinaha ee Cusub ee Baabuurta kadib 1da Juun 2021
by admin on 21-05-01
Farqiga u dhexeeya Qiimaha Waxtarka Tamarta Tamarta ka dib Hirgelinta Heerka Qaranka Shiinaha ee Cusub ee Motoorada wixii ka dambeeya Juun 1da 2021 Daabacaaddii ugu dambeysay ee heerka khasabka ah ee Shiinaha ee GB 18613-2020 “Qiimayaasha Xaddidan iyo Heerarka Karti-Ahaanshaha Tamarta ee Motoorada Korontada ...
Wixii su'aalo ah, su'aalo ama bogaadin ah, fadlan soo wac: 0086-137 9445 5099 ama buuxi foomka soo socda
BLDC Control Control for Power Drill, BLDC Controller for Power Drill, BLDC Motor Controller for Timaha qalajiyaha, FOC BLDC Maareeyaha Gawaarida ee Qodista Awooda, FOC BLDC Controller Motor for Cleaner Vacuum, FOC BLDC Controller for Power Drill, weydiinta pricelist
Maya 87, Wadada 4aad ee Dongfu, Magaalada Dongfeng, 528425, Zhongshan, Guangdong, China.